काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई कारवाही गर्नु पर्ने माग पुनः उठेको छ । शुक्रबारको बैठकमा समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदिप यादवले शेर्पाको अभिव्यक्ति आपक्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै अबिलम्ब निलम्बन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताए । यसअघि अघिल्लो हप्ता सोही पार्टीका अर्का सासंद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले पनि अध्यक्ष शेर्पामाथि कारबाहीको माग गरेका थिए ।
अध्यक्ष शेर्पाले गत जेठ ४ गते अमेरिकाबाट सञ्चालिन अनलाइन पोर्टल दुर्बिन नेपालको फेसबुक लाइभमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद यादवले उनीमाथि कारवाहीको माग गरेका हुन ।
उनले एन्फाको अध्यक्षजस्तो मर्यादित ओहदामा बसेका व्यक्तिले मधेशीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउँदा खेलकुदमन्त्रीकै संरक्षण त छैन भन्ने आंशका पनि गरे ।
उनले भने, ‘एन्फालाई सारा नेपालीले माया गर्छ तर त्यसका अध्यक्षले मधेशीलाई हेप्ने ? होच्याउने ? शेर्पाले कस्तो तागतमा यस्तो अभिव्यक्ति दिए ? पक्कै पनि खेलकुदमन्त्रीको तागतमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होला ।’
टोकियो ओलम्पिकः ७० पदकसहित चीन शीर्ष स्थानमा कायमै